Zvimiro - Inotevera Supply Chain
Nextschain ndeimwe yeakanakisa ese-mu-one e-commerce mhinduro dzekukudza rako repasi rose kudonhedza bhizinesi.
01 / Zviuru Zvekukunda Zvigadzirwa
Kukunda zvigadzirwa ndiyo kiyi yekumhanyisa yakabudirira online chitoro. Regedza kutambisa mari pazvinhu zvakashata, NextsChain yakapa nyanzvi kupa zviuru zvezvinhu zvinokunda kubatsira shopu yevatengesi kuita kuti kutengesa kuve nyore.
02 / Kutakura Pasi Pose
NextsChain mudiwa pamwe ne300+ vatakuri venyika yose kukuunzira nzira dzakawanda dzinodhura uye dzakavimbika dzekutakura zvekutakura pasirese. Base pane yedu akangwara system isu tinogona nyore kudzivirira kudzivirirwa panguva dzakabatikana nguva senge Kisimusi uye Nhema Chishanu, panguva iyi isu tinopawo kutumira kwekutevera.
03 / Zadzisa Maodha muBurk
Iwe unogona kuzadzisa odha dzako dzezuva nezuva muhuwandu uine mashoma mashoma panzvimbo peimwe neumwe, isu tinorongedza uye tinotakura zvigadzirwa zvakananga kune ako vatengi.
04 / Auto Inventory uye Mutengo Mazuva ese kugadzirisa
Inotarisa zvinhu masheya ezuva nezuva uye inochengeta zvinhu zvako masheya mazinga kusvika pari zvino uye shandisa mitemo yemitengo kugadzirisa mitengo yezvinhu otomatiki.
05 / Facebook Ads Target Ipa
Facebook Ads ndeimwe yeakanakisa kushambadzira chiteshi kune bhutsu yekutengesa, uye isu tinopa chaiyo Facebook Ads tarisiro yezvinhu zvese zvinokunda zvigadzirwa, chete nechinangwa chekubatsira Shopify vatengesi kuwedzera kwavo 10X kutengesa.
06 / Tsika yekumaka & kurongedza
Mapakeji ese achatumirwa pasi pezita rako rezita, uye isu tinopa zvakare kurongedza kwakasarudzika kuti ikubatsire iwe kuvaka yako mhando.